Abavelisi be-Android babheja kulwaziso lobuso | IPhone iindaba
Abavelisi be-Android babheja ekuqwalaselweni kobuso
iinyanga kubonakala ukuba iApple idlale isiphazamiso ngenkqubo yokhuseleko entsha ye-iPhone X. Ngaphambili kuyo yonke indawo kuhlala isikrini kwaye akukho ndawo yeqhosha lasekhaya Amahemuhemu malunga nendlela iApple esebenza ngayo kwinkqubo yokubeka inzwa yeminwe phantsi kwescreen sikhukula iwebhu. Kwaye njengoko bekubonakala, abanye abavelisi basebenze kwicala elinye.
Nangona kunjalo, kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokunikezelwa kwe-iPhone entsha Ummangaliso watsiba xa kwavezwa ukuba iApple inokuyishiya i-ID yokuChukumisa ithande inkqubo yokwamkelwa kobusol kude kube ngoko ayikaze ithathelwe ingqalelo njengeyona nto inokukhusela ukhuseleko lwe-smartphone. Oku kubangele ukuba ukhuphiswano lutshintshe izicwangciso ngokukhawuleza kwaye lusete imephu entsha: ukubonwa kobuso kwikamva.
Izixhobo ezininzi kudala zisebenzisa ukubonwa kobuso njengenkqubo "yokhuseleko", nangona kukho iziphene ezibonisa ukuba ukuthemba okuncinci kunokubekwa kuzo, njengefoto elula enokuvula isixhobo sakho. UKUYAI-pple iyitshintshile le teknoloji nge-ID yayo entsha yobuso ethi, ngokwenkampani ngokwayo, ikhuseleke ngakumbi kune-ID yesazisi, Isivamisi sayo somnwe esithandwa ngabasebenzisi kakhulu. Yayiyinkampani yokuqala ukubeka lonke ukhuseleko lwe-smartphone yayo ekuqwalaselweni kobuso, nokuba ikwazi ukwenza iintlawulo ngeApple Pay.
NgokukaMing Chi Kuo Olu khuphiswano sele lungenele ukusebenza kwiinkqubo zalo zokwamkelwa kobuso ngokusekwe kwikhamera ye-Apple's True Depth, ethi ukongeza ekubeni isetyenziselwe i-ID yobuso ikwasivumela ukuba senze i-emoji ngokwezifiso zobuso bethu ngexesha lokwenyani, kwaye eya kuthi ibenemisebenzi ebalulekileyo enxulumene ne-Augmented Reality thanks to its 3D sensors. Kwakhona umntu uphawula indlela emayilandelwe ngumntu wonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Abavelisi be-Android babheja ekuqwalaselweni kobuso
I-Jailbreak ye-iOS 10.2.1 sele ikho ngoku ngezixhobo ezingama-64-bit
I-iPhone X ibonakala kwividiyo inemvelaphi entsha eguqukayo